Jadon Sancho oo ka naxsaday kooxdiisa Borussia Dortmund kaddib markii uu si cad u sheegay…. – Gool FM
Jadon Sancho oo ka naxsaday kooxdiisa Borussia Dortmund kaddib markii uu si cad u sheegay….
(Yurub) 20 Nof 2020. Wargeysyada Spain ayaa sheegaya in ciyaaryahanka reer England iyo kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho uu doonayo inuu ka tago naadigiisa inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda.
Magaca Jadon Sancho ayaa xagaagii hore lala xiriiriyay inuu dib ugu soo laabanayo England mar kale, gaar ahaan kooxda Manchester United.
Jadon Sancho ayaa ku dhawaaday inuu ku biiro Red Devils, laakiin maamulka Borussia Dortmund ayaa diiday inuu ka tago ciyaaryahanka, si uu ula sii joogo kooxdiisa Jarmalka xilli ciyaareedkan.
Haddaba shabakada “Todofichajes” ee dalka Spain ayaa tilmaamtay in xiddiga reer England ee Jadon Sancho uu u sheegay saraakiisha Borussia Dortmund inuusan dooneynin inuu sii joogo kooxda.
Shabakada ayaa waxay hadalkeeda intaas ku sii dartay in laacibku uu ku wargaliyay maamulka inuu la sii joogi doono Borussia Dortmund illaa xagaaga soo socda, intaas kaddib uu doonayo inuu tijaabiyo khibrad cusub meelo kale.
Shabakada “Todofichajes” oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay intaas ku dartay in Manchester United ay wax ka ogtahay arintan, isla markaana ay hada wadahadalo xoogan kula jirto wakiilada ciyaaryahanka si ay ugu guuleysato adeegiisa kaddib dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Jadon Sancho ee kooxdiisa Borussia Dortmund uu dhamaan doono xagaaga 2023.
“Siddeed kooxood ayaa u tartamaya hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan” – Klopp
Michael Owen oo sheegay hal sabab uu Paul Pogba kaga tagi karo Manchester United